Goolhayihii layaabka lahaa ee Colombia – Rene Higuita – oo sharad adag ku galay koobka koonfurta America – muxuu sameyn doonaa? – Gool FM
Goolhayihii layaabka lahaa ee Colombia – Rene Higuita – oo sharad adag ku galay koobka koonfurta America – muxuu sameyn doonaa?
(Colombia) 12 June 2019. Goolhayihii reer Colombia – Rene Higuita – kaas oo ay bulshada caalamka ku yaqaanaan badbaadintii cajiibka aheyd uu sameeyay kulan saaxiibtinimo oo ay bartamahii sagaashameeyadii la ciyaareen dhigooda England.
Goolhayahaan qof walba oo kubadda cagta xusuustaas quruxda badan ayuu ka heystaa, garoonka Wembley ayuuna kusoo bandhigay badbaadin aysan qofna ku riyoon, kulan barbaro gool la’aan ah ku dhamaaday oo dhexmaray labada xul ee England iyo Colombia.
52-jirkaan wuxuu ku sharatamayaa in qarankiisa ay ku guuleysan karaan Copa America iyagoo group kula jira wadamada Paraguay, Argentina iyo Qatar.
“Hadii aysan Colombia ku guuleysan Copa America, waxaan jari doonaa timaheyga” ayuu yiri Rene ka hor bilowga tartanka xiisaha leh ee koonfurta America.
“Colombia waxey ciyaartaa kubad fiican”
“Waa inaan ka dambeynaa kaliya geesinimada tababare Carlos Queiroz”
“Waan hubaa iney natiijada imaan doonto”